Ubuhlobo obuhle busisiza ukuphatha ukucindezeleka | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya Impilo Ukucindezeleka
Ukuze uthole ukubuka okusheshayo kokucindezeleka, bukela lokhu ividiyo.
Ukucindezeleka okumangalisayo kuyisignali yesikhumbuzo semvelo emzimbeni osisiza ukuba siphendule izinsongo zesikhashana esifushane noma izinguquko endaweni yethu. Kuyindlela yokuphila esemqoka. Njengempendulo yomzimba, ivuselela amandla ethu ngokulindela isenzo, njengendiza noma ukulwa. Kungaphulwa zibe yizimpendulo ezine: ukwesaba (ukuvuvukala), indiza (ukugwema ukulimala okubonwayo ngokuvamile kuvame ukuphendula ukulwa); ukulwa (okubhekene nokulimala) nokufiphaza (ukudlala ufile futhi unethemba lokuthi ubhere / usongo luyaqhubeka). Lezi zigaba zingasebenza kuzo zonke izingcindezi zansuku zonke.
Uma siphilile, sinamandla okubhekana nesimo esifushane noma ukucindezeleka okukhulu, isibonelo, ukugijima ukubamba ibhasi. Inhliziyo yethu ikhuphuka, izinga lethu likashukela egazini lishintsha, umkhuhlane wethu ukwanda ukusiza ukupholisa umzimba njengoba sigijima. Lezi zindlela zonke zibangelwa ama-hormone okucindezeleka, i-adrenaline futhi i-cortisol. Uma siqala ukuvuswa, tshela, ngokubona ibhasi lethu ngaphambi kokuba sifinyelele esitobhini sebhasi, sikhiqiza i-adrenaline ne-noradrenaline (amagama aseMelika yi-epinephrin ne-norepinephrin) imizuzu embalwa ukuze asisize ukuba sifike lapho ngesikhathi. Lapho ukucindezeleka sekuphelile (i-whew! Siyenzile) umzimba wethu uthola ngokushesha, ibhalansi ibuyiselwe.
Uma ukucindezeleka kuqhubeka, isibonelo, silahlekelwa ibhasi futhi sisengozini yokuphuthuma komhlangano noma usuku olubalulekile, ngakho-ke i-cortisol ye-neurochemical ivutha ukuze kugcinwe amazinga wamandla okwanele ukubhekana nokucindezeleka okuqhubekayo. I-Cortisol ivuselela amandla ezinqolobaneni ezigcinwe esibindi nasezintanjeni ukusisiza 'silwe' noma 'sibalekele'. Inkathazo ingakwazi ukuqhubeka nokuphonsa ohlelweni kahle emva kokucindezeleka kudlulile.
I-Cortisol iyaqhubeka nokukhukhula isimiso sethu uma sinezinkinga eziningi zokucindezeleka ekuphileni kwethu. Namuhla izingcindezi zivame ukungokwengqondo, ukukhathazeka ngokuma kwezenhlalakahle, ukukhathazeka komndeni, impumelelo yomnotho noma isizungu, kunezingcupheni ezingokwenyama ezifana nezilwane ezilwa namabutho noma ama-tiger angama-saber. Umzimba wethu usabela ezinsongweni ezingokwengqondo ngendlela efanayo nezidumbu zokhokho bethu basendulo ezenza lezo zingozi ezisongelayo.
Njengomuntu osetshenziselwa / ukuxoshwa emazingeni athile wezithombe ezishaqisayo kumasayithi e-porno, adinga ukuvusa okuningi, izithombe ezishaqisayo ukuze uthole phezulu. Ukukhathazeka kwandisa ukuvuthwa kocansi okubandakanya ukwanda okukhulu kwe-dopamine. Amazinga aphezulu e-cortisol ohlelweni awuphawu lwezinto eziphilayo ngenxa yokungakhathazeki nje kuphela, kodwa nokucindezeleka.
Ukucindezeleka kungaqoqa ngaphansi kokuqwashisa kwethu okuqaphelayo. Ngokungazelelwe singazizwa sisindiswe ukuphila futhi sizizwe singakwazi ukubhekana nalokhu. Asikho amandla okuxazulula izinkinga noma izinkinga. Ubuchopho obugxilile buxhomeke emzimbeni. Ukucabanga okubalulekile kunzima kakhulu. Ukucindezeleka okukhulu, isikhathi eside kakhulu, kuba ukucindezeleka okungapheli. Yilapho umzimba wethu ungakwazi ukuzibuyisela futhi njengoba usebenza ngokucindezeleka okukhulu. Yilokho okusigqoke phansi, okwehlisa isimiso sethu somzimba sokuzivikela, kusenza sengozini enkulu engozini futhi kusenze sizizwe sicindezelekile, sikhathazeke futhi singalawuleki. Yilapho lapho sisengozini yokuthatha ezinye izikhuthazo, izidakamizwa noma utshwala, kanye nokukhushulwa ngokweqile kwe-intanethi ukusenza sizizwe singcono futhi sigweme ubuhlungu.
Ukusetshenziswa okungapheli kwezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kubeka ingcindezi enkulu emandleni omzimba agodliwe futhi kuholele kuzo zonke izinhlobo zezinkinga zomzimba nezengqondo. I-HPA I-Axis Dysregulation Emadodeni Nge-Disorder Sex Disorder (2015) - Ucwaningo olunemilutha yobulili besilisa engama-67 nezilawuli ezihambelana nobudala ezingama-39. I-axis ye-Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) ingumdlali ophakathi ekuphenduleni kwengcindezi. Ukulutha guqula izijikelezo zokucindezeleka kwengqondo okuholela e-axis ehlulekayo ye-HPA. Lolu cwaningo olumayelana nezidakamizwa zocansi (abesilisa ocansini) lathola izimpendulo zokucindezeleka eziguquguqukayo ezibonisa ukutholakala kwezidakamizwa ezidakamizwa.
Indlela esiziphatha ngayo ukucindezeleka phakathi neminyaka iyisihluthulelo ekuziphatheni kwethu kanye nobuhlobo bethu. Njengoba sibonile kusukela Nikeza isifundo, ukulutha umlutha, ukucindezeleka kanye neurosis yizithiyo ezinkulu ekuhlotsheni oluhle, olujabulisayo.
[/ x_text] [/ x_kholomu] [/ x_row]
Ukucindezeleka kugxila ekugxilweni komzimba nokunikezwa kwamandla okuvela ezindaweni eziyinhloko ezifana nobuchopho, uhlelo lokugaya umzimba kanye nezitho zokuzala ukuze zondle amandla kulezo zindawo ezidinga amandla ngokushesha ukuze zisisuse engozini ebonwayo. Yingakho ngokuhamba kwesikhathi, ngaphandle uma sibheka ukucindezeleka ngokufanele, futhi ukucindezeleka kungenakugwemeka, sihlakulela izimo zokugaya njenge-syndrome eyathukuthela, noma inkumbulo embi futhi ukungakwazi ukugxila isikhathi eside. Sinciphisa amasosha omzimba wethu, sithola kalula izifo kalula futhi sithatha isikhathi eside ukuphulukisa. Ukucindezela isikhathi isikhumba nomzimba.
Ngaphansi kokucindezeleka okungapheli, i-adrenaline idala izibazi emithanjeni yethu yegazi ezingabangela ukuhlaselwa yinhliziyo noma isifo sohlangothi, futhi i-cortisol ilimaza amangqamuzana we-hippocampus, ikhubaza ikhono lethu lokufunda nokukhumbula.
Ngomunye, uhlobo olubi kunazo zonke lokucindezeleka ngumzwa wokuthi asikwazi ukulawula inkinga, ukuthi asinasici.
Ngamafuphi, ukucindezeleka kusithinta.
<< Imiphumela Yomzimba Isikhuthazo Esingajwayelekile >>